casino classics-ny nanadino floorshakers
casino clipart mainty sy ny fotsy
ny fomba mihazakazaka manokana casino alina
ny fomba mihazakazaka roulette latabatra
Tany amin'ny faritra avaratr'i Californie sy ny Ione Tarika ny Miwok Indiana dia mety tsy ho ela dia ho mahazo manokatra ny foko casino taorian'ny voalaza fa manjaka ao ny 15 taona ny miady mafy mba hahazo 220 velaran-tany akaikin'ny tanàna kely ny Plymouth napetraka teo an-fahatokiana casino clip art mainty sy ny fotsy. Araka ny alatsinainy tatitra avy Amin'ny Sacramento Renitantely gazety, tamin'ny herinandro lasa teo tany an-matoky grant avy amin'ny Biraon'ny Indiana Raharaha dia midika fa ny federaly-ekena foko izao maimaim-poana mba hanomboka ny fifampiraharahana amin'ny fanjakana momba ny drafitra mba hitondra ny casino ny Amador County tetika vidina any 2012. Faritra ady: Ny gazety dia nitatitra fa ny casino tolo-kevitra avy amin'ny Ione Tarika ny Miwok Indiana efa miatrika manao fanoherana avy amin'ny maro ny mponina ao an-toerana sy ny mpiasam-panjakana nanomboka ny taona 2004. Ireo mpanohitra lazaina nilaza fa ny tsy misy hatak'andro eny amin'ny manodidina sahady ny endri-javatra roa toy izany toerana ao amin'ny Jackson Rancheria Casino Resort sy ny Harrah Avaratr'i Californie ary ny iray hafa dia mety hitondra bebe kokoa ny tsy ilaina ny fifamoivoizana amin'ny fiaraha-monina fotsiny ihany ny 1.000.
Very-pitsarana: Ny Sacramento Renitantely, voalaza fa ny faritra misy ireo mpifidy nampahatsiahy trio ny Plymouth-panjakana tamin'ny taona 2004 noho ny fanohanana ny casino drafitra raha Amador County na dia lasa lavitra hatramin'ny rakitra federaly fitoriana ny filazana fa ny foko tsy nanana fifandraisana ara-tantara ny faritra casino classics-ny nanadino floorshakers. Na izany aza, 2015 didim-pitsarana eo amin'ny raharaha lazaina dia nahita fa ny Ione Tarika ny Miwok Indiana dia 'ekena ny Indiana no foko eo ambany federaly fahefana tamin'ny 1934' ary tsy nisy ny tsy ara-dalàna fanamarinana invalidating 2012 tany fahazoana. Tany am-boalohany ny olona ao anatiny: Sara Dutschke, Filohan'ny ho an'ny Ione Tarika ny Miwok Indiana, voalaza fa nilaza ny gazety iray fa ny foko dia 'niandry ela be ity' ny 750 mpikambana dia afaka manoritra ny razambeny izay taty aoriana dia lasa Amador County indray ny taranaka maro nifandimby casino clipart mainty sy ny fotsy. Dutschke voalaza fa nilaza Ny Sacramento Renitantely,.. ny fomba mihazakazaka manokana casino alina.
"Fa ny Ione Tarika ny Miwok Indiana, tsy fotsiny mikasika ny fampandrosoana ny lalao asa, izany no tena momba ny famerenana amin' ny tany fototra dia afaka mampiasa ny fanohanana ny mpikambana amin'ny ho avy." Tsy voafetra fanelanelanana: Dutschke voalaza fa nilaza koa ny gazety fa ny foko izao mikasa ny manomboka miteny amin'ny California manam-pahefana momba ny lalao voalamina tsara na ny fizotry ny coronavirus valan'aretina 'efa natsipy ny wrench an-drafitra' ary natao izany miha-sarotra ny maminavina raha toy izany ny fifampiresahana dia mety hanomboka. ny fomba mihazakazaka roulette latabatra.
Ny vola lany amin'ny filokana uk